13ka Dugsi ee ugu Fiican ee aan Ivy League ahayn ee Pre Med 2022
13 -ka Dugsi ee ugu Fiican Non Ivy League ee Pre Med
Dugsiyada Ivy League waa tartan waana qaali. Fiiri liiskayaga dugsiyada aan Ivy League ugu fiican ee premed-ka Tayada tacliimeed ee dugsiyadani waxay la mid tahay machadyada Ivy League, waa kuwo la awoodi karo, waxayna leeyihiin heerar aqbalaad sare leh.
Machadyada Ivy League aad bay caan u yihiin, haddaysan ahayn dugsiyada ugu caansan Maraykanka, ka dib, barnaamijyadooda tacliin waa heer caalami iyo heer sare. Waa riyada arday kasta inuu aado Ivy League, sidaa darteed, kumanaan arday ayaa mid kasta codsada sanad walba, waxaana la doortaa tiro aad u yar sababtoo ah nidaamkooda gelitaanka adag.
Si aad fursad ugu hesho gelitaanka Ivy League, waxaad u baahan tahay ugu yaraan GPA oo ah 3.7 iyo wixii ka sareeya iyo buundada SAT ee 1500. Xitaa haddii ay jiraan shuruudaha adag, arday badan ayaa weli awood u leh inay buuxiyaan oo soo diraan codsiyadooda. Tani waxay ka dhigaysaa kuwan Ivy League inay aad u tartamaan oo sidoo kale heerarkooda gelitaanka ayaa aad u hooseeya sidoo kale, ku dhawaad ​​​​4% ilaa 8% heerka aqbalaadda.
1 Waa maxay Dugsiga Ivy League?
2 Maxay qabtaan Dugsiyada Hore ee Med?
3 Dugsiyada ugu Fiican ee aan Ivy League ahayn ee Pre Med
3.1 1. Jaamacadda Northwestern
3.2 2. Jaamacadda Georgetown
3.3 3. Jaamacadda Johns Hopkins
3.4 4. Stanford University
3.5 5. Jaamacadda Emory
3.6 6. Jaamacadda Duke
3.7 7. Jaamacadda Rice
3.8 8. Jaamacadda Vanderbilt
3.9 9. Kulliyadda Amherst
3.10 10. Jaamacadda Western Reserve University
3.11 11. Jaamacadda Tulane
3.12 12. Jaamacadda Washington ee Saint Louis
3.13 13. Kuliyada Williams
Waa maxay Dugsiga Ivy League?
Ivy League waa shir isboorti oo kuliyadeed oo Mareykan ah oo ka kooban sideed jaamacadood oo cilmi baaris gaar ah. Dugsiyadan waxaa loo tixgaliyaa inay yihiin kuwa ugu sharafta badan uguna sarreeya dhammaan kulliyadaha ku yaal Mareykanka, sideeda dugsi ee Ivy League waa:
Machadyada kale ee sare ee aan ahayn Ivy League weli waxay la siman yihiin iyaga gaar ahaan barnaamijyada caafimaadka, taas oo ah jihada ugu weyn ee maqaalkan. Jaamacadaha sida John Hopkins, Stanford, Duke, Northwestern, iyo kuwa kale oo badan ayaa halkan looga hadlayaa. Marka laga reebo barnaamijyadooda caafimaadka, barnaamijyada kale ee tacliimeed ee ay bixiyaan machadyadan aan Ivy League ahayn ayaa ah kuwa ugu sarreeya.
Hadda, raacitaanka barnaamij la sii qorsheeyay mid ka mid ah jaamacadahan aan-ivy league kaama dhigi doono walaac aad u badan sida Ivy League oo waxaad sidoo kale heli doontaa waxbarasho hore oo heer caalami ah iyo sidoo kale si loogu diyaariyo safarka caafimaadka. Waa inaad fahamtaa in qaar badan oo ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee loogu talagalay hammiga dugsi-caafimaad aysan ku xaddidnayn oo keliya dugsiyada Ivy League.
Jaamacadaha fanka liberaaliga ayaa bixiya qaar ka mid ah barnaamijyada hore loo sii qorsheeyay ee dalka. Maanta, waxaan ka hadli doonaa kuwa ugu fiican dugsiyada aan Ivy League ahayn ee premed.
Maxay qabtaan Dugsiyada Hore ee Med?
Dugsiyada Premed waa machadyo tacliin sare oo ku yaal Maraykanka kuwaaso siiya waddo waxbarasho oo loogu talagalay ardayda xiisaynaysa inay noqdaan arday caafimaad. Waxbarashada ka hor, hawlaha iskaa wax u qabso, waayo-aragnimada bukaan-socodka, cilmi-baarista, iyo habka codsiga ayaa dhamaantood qayb ka ah habka diyaarinta ardayga dugsiga caafimaadka.
Qaar ka mid ah barnaamijyada pre-med-ga waxa lagu calaamadeeyay “xirfadle hore” sababtoo ah waxay ardayda u diyaariyaan shahaado xirfadeed oo kala duwan ama barnaamijyo dugsi qalin-jabineed oo leh shuruudo isku mid ah (sida caafimaadka, xanaanada xoolaha, ama dugsiyada farmashiyaha).
Pre-med waa raad kuleej oo ka kooban koorsooyin gaar ah oo aad ogolaatay inaad u qaadatid shuruudo looga baahan yahay dugsiga caafimaadka, inkastoo ay u egtahay mid weyn. Ardaydu waxay ku baran karaan edbin kasta oo ay rabaan, laakiin si ay ugu sii jiraan wadada pre-med-ka, waa inay qaataan dhammaan koorsooyinka daawada kahor loo baahan yahay. Inta badan ardayda pre-med-ga ayaa ku takhasusay maadada ku xidhan caafimaadka, sida bayoolaji ama kimistari.
Haddii aad ogtahay inaad rabto inaad noqoto dhakhtar adigoo weli ku jira dugsiga sare, raadso jaamacado si waafi ah kuugu diyaarin doona xirfadaada mustaqbalka. Si kastaba ha ahaatee, maskaxda ku hay in waayo-aragnimadaada daawada ka hor ay ugu dambeyntii kuu diyaarineyso yool sare: dugsi caafimaad. Barnaamijka daawada kahor ee kuliyada ku haboon ayaa xaqiijin doonta guusha afartan qaybood ee muhiimka ah ee codsiga dugsiga caafimaadka:
Lahaanshaha celcelis dhibco wanaagsan
Helitaanka buundooyinka MCAT sare waa hab fiican oo aad ku bilowdo xirfadaada.
Horumarinta resume adag iyo helitaanka hawlo xiiso leh
Buuxinta arjiga waxaa ka mid ah warqado talobixin ah, qoraallo, iyo wareysiyo, in kastoo ay tahay inaad ogaato in kuwani ay inta badan ka madax bannaan yihiin dugsiga hoose ee aad doorato.
Maqaalkan, waxaanu ku samaynay liiska dugsiyada ugu fiican ee aan ahayn ivy league ee pre med. Dugsiyadan waxaa lagu go'aamiyaa arrimo ay ka mid yihiin heerarka aqbalaadda, GPA, diyaarinta MCAT, waayo-aragnimada daryeelka bukaanka, iyo waayo-aragnimada cilmi-baarista.
Dugsiyada ugu Fiican ee aan Ivy League ahayn ee Pre Med
Hoosta lagu taxay, si gaar ah looma kala horeeyo, waa kuwa ugu fiican dugsiyada aan ivy league ahayn ee pre med.
Jaamacadda Johns Hopkins
Jaamacadda Kaydka Western
Jaamacadda Washington ee magaalada Saint Louis
1. Jaamacadda Waqooyi-galbeed
Jaamacadda Waqooyi-Galbeed waxay ku taal Evanston, Illinois, waana mid ka mid ah dugsiyada ugu wanaagsan ee aan ahayn ivy league ee pre med. Heerka aqbalaadda caafimaadka halkan waa 11% waxaadna u baahan doontaa buundooyinka SAT ee u dhexeeya 1450 - 1540 ama ACT 33 - 35 si laguugu aqbalo qorshaha hore.
La-talinta Mihnadaha Caafimaadka ee Jaamacadda Waqooyi-galbeed waxay siisaa ardayda pre-med-ka kahor qalab badan. Talo/tababarka MCAT, xisaabiyeyaasha GPA, iyo fursadaha hadhaynta deegaanka ayaa ah dhawr ka mid ah agabyada la heli karo. Waqooyi-galbeed waxay hubisaa in ardaydeeda pre-med-ka ay si wanaagsan ugu diyaar garoobeen dugsiga caafimaadka.
Waxay ku taal Washington DC oo ku jirta liiskayaga liiska ugu fiican dugsiyada aan ivy league ahayn ee pre med, Jaamacadda Georgetown waxay siisaa waxbarasho tayo leh oo tayo leh ardayda si ay u rumeeyaan riyooyinkooda xagga caafimaadka. Heerka aqbalaadda halkan waa 17% waxaadna u baahan doontaa buundada SAT ee 1370 ilaa 1530 ama sharciga 31 - 34 si laguugu aqbalo barnaamijka barnaamijka.
Barnaamijka Xulashada Cilmi-baarista ee Jaamacadda Georgetown (GUROP), kaas oo u oggolaanaya ardayda shahaadada koowaad ee jaamacadda inay cilmi-baaris ku sameeyaan xubnaha macallimiinta, waxay bixiyaan fursado cilmi-baaris oo kala duwan. Xarunta Caafimaadka ee Jaamacadda Georgetown waxay sidoo kale leedahay fursado badan. Iskaa wax u qabso ee Isbitaalka Jaamacadda Georgetown, ku biirista Georgetown EMS (GERMS), iyo ka shaqeynta dhowr xarumood oo shuraako ah oo ku yaal agagaarka DC waa dhammaan dariiqooyinka ay ardaydu ku heli karaan khibrad caafimaad.
3. Jaamacadda Johns Hopkins
Johns Hopkins waxaa caalamka looga aqoonsan yahay wax ku biirinta sayniska gaar ahaan dhanka caafimaadka. Ma sheegi kartid dugsiyada caafimaadka ee ugu sarreeya adduunka oo aad ka tagto Johns Hopkins. Waxay ku taal Baltimore, Maryland, waana mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan dugsiyada aan ahayn ivy league ee pre med.
Heerka aqbalaadu waa 12%. Codsadayaashu waxay u baahan yihiin buundooyinka SAT ee u dhexeeya 1450 - 1560 ama dhibcaha ACT ee u dhexeeya 33 - 35 si loogu tixgeliyo gelitaanka barnaamijka hore. Dhammaan xafiis "kahor-xirfadeedka" ee Johns Hopkins waxaa u heellan in uu ka caawiyo ardayda sidii ay u heli lahaayeen fursadaha qalin-jabinta ee noocyo kala duwan ah.
Marka laga reebo barnaamijyadeeda cilmi-baarista ee caanka ah, Johns Hopkins wuxuu bixiyaa fursado shaqo oo caafimaad oo kala duwan iyada oo loo marayo shaqada iskaa wax u qabso ee Baltimore oo dhan. Cutub ka mid ah Alpha Epsilon Delta, Ururka Hopkins ee Waxbarashada Kahor, iyo Ururka Hogaaminta Caafimaadka Kahor Haweenka ayaa ka mid ah ururo arday oo badan oo u heellan inay wax ka bartaan xirfadda caafimaadka ee jaamacadda (WPHLS).
Ardeydu waxay la xiriiri karaan takhaatiirta Isbitaalka Johns Hopkins iyagoo u maraya qaar badan oo ka mid ah ururadan.
4. Jaamacadda Stanford
Stanford waa hay'ad cilmi baaris oo hogaaminaysa aduunka oo leh aqoonsi caalami ah barnaamijyadeeda tacliineed ee tayada leh iyo wax ku biirinta daawada, injineernimada, ganacsiga, iyo qaybaha kale. Stanford waxa kale oo uu soo saaray qaar ka mid ah hogaamiyayaasha adduunka ee hay'ado iyo waaxyo kala duwan oo ay ku jiraan madaxweynayaal, caan ah, iyo saynisyahano badan.
Xulashada Stanford pre-med waa mid adag iyadoo kaliya la aqbali karo 4.4%. Si loo aqbalo, waxaad u baahan tahay inaad haysato buundooyinka SAT inta u dhaxaysa 1420 - 1570 ama buundooyinka SAT ee u dhexeeya 32 - 35. Ardayda hore ee Stanford waxay heli karaan fursado badan oo ka baxsan manhajka iyo cilmi baarista. Barnaamijkooda Stanford Immersion ee Taxanaha Daawada (SIMS) wuxuu u oggolaanayaa ardayda fasalka labaad, kuwa da'da yar, iyo waayeelka inay kormeeraan dhakhaatiirta Isbitaalka Stanford, Isbitaalka Maamulka Veterans Palo Alto, iyo Isbitaalka Carruurta Lucile Packard.
Jaamacadda Stanford waa mid ka mid ah iskuulada horyaalnimada ivy ugu fiican ee loogu talagalay pre med waxayna ku siin doontaa ilo ku filan oo ku habboon si aad ugu fiicnaato raadintaada caafimaad.
5. Jaamacadda Emory
Jaamacadda Emory waxay ku taal Atlanta, Georgia, waana mid ka mid ah dugsiyada ugu wanaagsan ee aan ahayn ivy league ee pre med. Habka xulashada maaha mid aad u adag waxaadna fursad u haysataa in laguu ogolaado barnaamijka hore haddii aad haysato buundooyinka SAT ee u dhexeeya 1350 - 1520 ama dhibcaha ACT inta u dhaxaysa 31 - 34.
La-talinta caafimaadka kahor Emory waxay ka caawisaa ardayda inay u diyaar garoobaan codsiyada dugsiga caafimaadka iyada oo loo marayo seminaaro, waxqabadyo, iyo fadhiyo kooxeedyo yaryar.
Jaamacadu waxay siisaa fursado badan oo cilmi baaris ah waxayna xitaa u ogolaataa ardayda inay helaan buundada koorsada dadaalkooda. Qaar ka mid ah fursadaha cilmi-baarista Emory waxay u baahan yihiin ardayda inay isku qoraan koorsada inta ay baarayaan si ay u baraan mabaadi'da cilmi-baarista. Ardaydu waxa kale oo ay shaqadooda la wadaagi karaan facooda iyo lataliyeyaal doodaha cilmi-baadhista dayrta iyo guga ee jaamacadda.
6. Jaamacadda Duke
Jaamacadda Duke waa machad sare oo heersare ah oo waxbarasho oo ku yaal Durham, North Carolina, waxayna ku jirtaa liiskayaga dugsiyada ugu fiican ee aan ahayn ivy league ee pre med. Heerka aqbalaadda halkan waa mid aad u adag oo ah 7.8%, sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad ahaato meesha ugu sareysa ciyaartaada si loogu tixgeliyo gelitaanka wadada la sii qorsheeyay. Haddii aad haysato buundooyinka SAT ee u dhexeeya 1500 - 1560 ama dhibcaha ACT inta u dhaxaysa 33 - 35 markaa waxaad fursad u haysataa in lagu aqbalo.
In kasta oo uu tacliin ahaan aad ugu adag yahay, Duke waxa uu leeyahay boqolkiiba 85 heerka aqbalaadda dugsiga caafimaadka. Durham iyo Duke's School of Medicine ee la mahadiyay ayaa siiya xulashooyin badan oo loogu talagalay ardayda Duke, laga bilaabo la-talin shaqsiyeed ilaa cilmi baaris iyo fursado shaqo barasho.
7. Jaamacadda Bariiska
Jaamacadda Rice waa mid ka mid ah iskuulada ugu wanaagsan ee aan ahayn ivy league ee loogu talagalay pre med oo ku yaal Houston, Texas, iyo mid ka mid ah jaamacadaha ugu fiican Texas. Waxay bixisaa barnaamij raadraac la sii qorsheeyay si wax ku ool ah oo hufan loogu diyaariyo ardayda wejiga xiga ee socdaalkooda caafimaad. Heerka aqbalaadda waa 8.7% oo haddii aad leedahay buundada SAT ee u dhaxaysa 1470 - 1560 ama dhibcaha ACT inta u dhaxaysa 33 - 35 markaa waxaad geli kartaa barnaamijka la sii qorsheeyay.
Xafiiska La-talinta tacliinta ee Jaamacadda Rice ayaa siiya ardayda pre-med-ka kahor agabyo badan, oo ay ku jiraan xog-ururinta cilmi-baarista iyo fursadaha shaqo barasho ee la xiriira iyo sidoo kale hanuuninta la-talinta kahor-med. Barnaamijka Caafimaadka ee Ogolaanshaha Wadajirka ah ee Rice wuxuu kaloo caawiyaa ardayda Texas ee dakhligoodu yar yahay inay dhigtaan dugsiga caafimaadka. Houston waxa kale oo ay hoy u tahay dhawr cosbitaal oo caan ah kuwaas oo bixiya fursadaha cilmi-baadhis, hadh, iyo iskaa wax u qabso.
8. Jaamacadda Vanderbilt
Jaamacadda Vanderbilt waxay ku taal Nashville, Tennessee, waana mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan dugsiyada aan ivy league ahayn ee loogu talagalay barnaamijyada premed-ka oo wata baabuur xamuul ah oo agab ah si looga caawiyo ardayda gelitaanka dugsiga caafimaadka ugu fiican. Heerarka aqbaliduhu aad buu u adag yahay 10% laakiin haddii aad haysato buundada SAT ee u dhaxaysa 1450 - 1560 ama dhibcaha ACT inta u dhaxaysa 33 - 35 markaa waxaad fursad u haysataa in lagu aqbalo qorshaha hore.
Jaamacadda Vanderbilt waxay ku faantaa barnaamij caafimaad kahor iyo, sida jaamacado badan oo cilmi baaris ah, barnaamij cilmi baaris oo xoogan. Vanderbilt Undergraduate Research Clinical Internship Internship, tusaale ahaan, waa barnaamij nooc ka mid ah oo u oggolaanaya ardayda shahaadada koowaad ee jaamacadeed inay ka shaqeeyaan Xarunta Caafimaadka ee Jaamacadda Vanderbilt iyagoo cilmi-baaris la sameynaya borofisar.
Qaar badan oo ka mid ah ururada pre-med pre-med iyo naadiyo u janjeera dhanka culuumta STEM qaarkood ayaa sidoo kale laga heli karaa jaamacadda. Maadaama Isbitaalka Vanderbilt Campus uu aad ugu dhow yahay jaamacadda, ardaydu waxay xiriir la yeelan karaan dhakhaatiirta.
9. Kulliyadda Amherst
Kulliyadda Amherst, oo ku taal Amherst, Massachusetts, waa mid ka mid ah dugsiyada ugu wanaagsan ee aan ahayn ivy league ee loogu talagalay premed. Dugsigu wuxuu bixiyaa fursado iyo agabyo kala duwan si looga caawiyo ardayda hawlahooda caafimaad. Waxay leedahay heerka aqbalaadda 11.3% iyo buundada SAT ee loo baahan yahay waa inta u dhaxaysa 1420-1530 halka dhibcaha ACT ay u dhexeeyaan 31-34
Amherst sidoo kale waxay ku faantaa manhaj furan, taasoo ka dhigaysa ikhtiyaar wanaagsan ardayda pre-med kuwaas oo raba inay ku weynaadaan wax aan ahayn STEM. Marka laga soo tago taas, Amherst waa kulliyad faneedka xorta ah oo heer sare ah. Ardaydu waxay awood u yeelan doonaan inay si wanaagsan u bartaan macalimiintooda sababtoo ah isdiiwaan gelinta yar iyo xoojinta waxbarashada heerka koowaad, taasoo keentay in la taliyo iyo waraaqo talobixin ah oo xusid mudan. Waxa kale oo aad heli doontaa la-taliyayaal ka hor daawada kuwaas oo si dhab ah u danaynaya horumarkaaga.
Guddiga Xirfadaha Caafimaadka kahor sidoo kale aad ayuu ugu firfircoon yahay habka gelitaanka dugsiga caafimaadka, isagoo ka caawinaya wareysiyada jees-jeeska ah, bixinta macluumaadka gudaha (qoraalada wareysiga, xogta codsade hore, iyo wixii la mid ah), oo kugula taliya inta lagu jiro nidaamka. Heerka aqbalaadda dugsiga caafimaadka waa 75-80%, laakiin marka dib-u-codsadayaasha la caddeeyo, tiradu waxay kor u kacdaa ku dhawaad ​​90%.
10. Jaamacadda Western Reserve University
Waxa laga yaabaa inaad fursad fiican ka hesho barnaamijka la sii qorsheeyay ee Case Western Reserve University. Heerka aqbalaadda ee barnaamijka waa 29% oo shuruudaha dhibcaha ACT/SAT xitaa ma aha wax adag in la buuxiyo. Haddii aad haysato buundada SAT inta u dhaxaysa 1370-1490 ama dhibcaha ACT inta u dhaxaysa 30-34 markaa waad gali kartaa.
Case Western Reserve University waa tusaale cajiib ah oo kuleej leh meel aad u wanaagsan, maadaama ay ku dhowdahay rugta caanka ah ee Cleveland Clinic iyo machadyada kale sida isbitaalada Jaamacadda iyo Louis Stokes Cleveland VA Medical Center.
Ardaydu waxay heli doonaan hawlo waxbarasho iyo iskaa wax u qabso oo kala duwan. Ardayda CWRU waxay sidoo kale heli karaan waayo-aragnimo caafimaad iyagoo si tabaruc ah ula shaqeeya kooxda EMS ee kambaska ama ka caawinta guryaha dadka lagu xanaaneeyo, hospices, ama guryaha soo kabashada bukaanka.
11. Jaamacadda Tulane
Jaamacadda Tulane waxay safka hore kaga jirtaa cilmi-baarista caafimaadka ee kacaanka ee dalka, ardaydana waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ka qaybqaataan intii suurtagal ah. Waaxda Unugyada iyo Molecular Biology, arday badan ayaa xiiseynaya cilmi-baarista waxayna codsan karaan deeqaha xagaaga ee la jecel yahay si ay waxbarashadooda u sii wataan.
Waxaa sidoo kale jira 11 jaaliyado pre-med-ka ah oo jooga machadka, mid walbana diirada saaraya, sida wacyiga autism, caafimadka caalamiga ah iyo bulshada, iyo guud ahaan kambaska ay maamusho EMS.
Heerka aqbalaadda waa 17% iyo buundada SAT ee loo baahan yahay ee u dhaxaysa 1350-1490 ama ACT inta u dhaxaysa 30-33. Jaamacadda Tulane waa mid ka mid ah iskuulada horyaalnimada ivy ee ugu wanaagsan ee loogu talagalay pre med waxayna ku siineysaa labadaba xirfado aragtiyeed iyo mid wax ku ool ah si aad uga dhigto dugsi kasta oo med ah inuu ku aqbalo.
12. Jaamacadda Washington ee Saint Louis
Kani waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan dugsiyada aan ivy league ahayn ee premed-ka iyo mid ka mid ah machadyada waxbarasho ee ugu wanaagsan Washington. Waxay ku jirtaa kaalinta 19-aad ee jaamacadaha adduunka ugu fiican sida ay qortay US News & World Report. Waxa kale oo ay bixisaa bandhig la sii qorsheeyay oo ku dhiirigelisa ardayda inay codsadaan.
Shuruudaha buundada SAT waa inta u dhaxaysa 1480-1550 iyo ACT waa inta u dhaxaysa 33-35. Qaadashada mid ka mid ah buundooyinkan waxay ku siin kartaa fursad barnaamijka la sii qorsheeyay. Ogsoonow in heerka aqbalku uu yahay 13% kaliya sidaa darteed, gelitaanka waa mid tartan ah.
Ardayda WashU pre-med waxay heli karaan barnaamij talobixin ah oo afar sano ah, iyo sidoo kale seminaaro udiyaar ah MCAT, waraysiyo jeesjees ah, aqoon-isweydaarsiyo qorista codsiga dugsiga med, iyo laba cosbitaal oo u dhow. WashU waxay bixisaa caawimo joogto ah oo gacan-ku-tashi ah, iyo sidoo kale cilmi-baadhis iyo layliyo la xidhiidha, si loo dammaanad qaado in ardaydooda pre-med-ka ay ku socdaan waddada saxda ah.
13. Kuliyada Williams
Kulliyadda Williams waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan dugsiyada aan ahayn ivy league ee loogu talagalay pre med oo leh heerka aqbalaadda 13%. Gelitaanka barnaamijka waa mid tartan badan laakiin haddii aad haysato buundooyinka SAT ee u dhexeeya 1410 -1550 ama ACT inta u dhaxaysa 32-35 markaa waxaad fursad u haysataa in lagu aqbalo.
Barnaamijyo badan oo daawada pre-med ka ah ee Williams College ayaa gaar u ah ardayda William. Tusaale ahaan, koleejku waxa uu bixiyaa barnaamij shaqo barasho oo dhamaystiran oo ay taageeraan ardaydii hore oo ardaydu ka shaqayn karaan meel ay doorteen. In ka badan 200 oo arday ayaa cilmi-baadhis xagaaga ka sameeya Williams, ardayduna waxay ka dalban karaan layliyo machadka Whitehead, Harvard Stem Cell Institute, iyo shaybaadhka bayoolajiga Marine oo si gaar ah loogu abuuray ardayda Williams.
Tani waxay soo afjaraysaa 13-ka dugsi ee ugu wanaagsan ee aan ahayn ivy league ee loogu talagalay daawada kahor. Haddii aad cilmi baaris sameyso ama haddii aad horay u taqaanay iskuulladaada, waxaad arki doontaa in jaamacadahan ay yihiin machadyo darajo sare leh oo ka mid ah kuwa ugu wanaagsan adduunka haddii ay noqoto waxbarid akadeemiyadeed ama cilmi baaris.
9 Dugsiyada Pre Med ee ugu Fiican California
10 Iskuulada Caafimaadka ee ugu Fiican Florida oo leh Khidmadaha
100-ka dugsi ee ugu sarreeya pre-med oo leh khidmaddooda hadda
13ka Dugsi Caafimaad Ee Ugu Sarreeya Oo Lacag La'aan Ah
Previous Post:10-ka Lacag ee Jaamacadaha Ireland ugu hooseeya ee Ardayda Caalamiga ah
Post Next:10ka Dugsi ee ugu Fiican Down Syndrome ee Florida